NGABA IROCKETMAN INESIMO SOKUQALA SOKULALANA NGOKWESINI KWIFILIMU ENKULU YESTUDIYO? - UKUMELWA KWE-LGBTQ
Isibonelelo Sedr Alan
Umzala Wam Urachelhel
Intatheli yaseHollywood uqhayisa ngesihloko esinomdla izolo: Rocketman Umzila weBlazes njengeFilimu yokuQala yeStudiyo yokuBonisa isini esabelana ngesini. Impendulo yam yokuqala yayikothuka. Ngu-2019-ngaba eli lixesha lokuqala ukuba istudiyo esikhulu sikhuphe ifilimu ene-R enomlinganiso wesini phakathi kwamadoda amabini kuyo?
Kukho ezinye eziphambili, iAward Academy ekhethiweyo-ekhethiweyo, njenge Intaba yeBrokeback kwaye Ndibize Ngegama Lakho , ebonisa isini phakathi kwamadoda amabini, kodwa zombini iifilimu zakhutshwa zii studio ezincinci, ngelixa Rocketman Kukhutshwa kwi-mega studio eParamount. Ngama-1980, ii-Artist zaseUnited zazineefilimu ezibonisa izibini ezithandanayo, kodwa akukho nto yayinkulu njengaye Rocketman .
Intatheli yaseHollywood , kwisiqwenga sabo kwifilimu , Iifilimu zangaphambili ezazibonisa isini sendoda engamakhwenkwe azange zijolise kubaphulaphuli abanzi Rocketman. Bakwabhala ukuba ifilimu ilungisa ukuvuswa kwayo ngokwesondo ngaphandle kokuphazanyiswa kwaye into ephawuleka ngakumbi kukuba iza ngexesha apho kukho kuphela ii-studio ezintlanu eziphambili ezishiyekileyo, zimi emva kweDisney ifumana iFox (iWarner Bros., i-Universal kunye ne-Sony nayo hlala).
Ndiyazi ukuba kufanelekile ukuba sibhiyozele esi siganeko sibalulekileyo, kodwa inxenye yam iyazibuza ukuba sifike njani ku-2019 ngaphambi kokuba isitudiyo esikhulu sikulungele ukubonisa oku xa sifumene imiboniso bhanyabhanya yesini esahlukileyo kwifilimu. Okubaluleke ngakumbi kukuba kutheni abantu abathandanayo besini esahlukileyo bebonwa njengabanobukrelekrele kunendawo yokudlwengula okanye imiboniso yobundlobongela obuphathelele kwezesondo?
Ndiyayiqonda indlela yokucinga yezemali yee studio ezithile; njenge THR Ucacisile, kubandakanya nomdlalo wothando wesini esingathandekiyo ukwenza ifilimu ukuba ikhululwe e-China, kwaye ke izitudiyo ziyathandabuza ngakumbi kwiiprojekthi zokukhanya eziluhlaza ezinamabali othando e-LGBTQ +. Singayamkela loo nyani ngelixa sibuza ukuba kutheni kuthathe ixesha elide ukuba amadoda amabini asondele xa ii-studio zikulungele ukubandakanya imiboniso yobundlobongela obuphathelele kwezesondo.
Imifanekiso bhanyabhanya kaGoogle ekhawulezileyo yeParamount athe wayivelisa okanye wayisasaza ibonisa ukuba ayibaleki kubundlobongela (kubandakanya ukusweleka komntwana esikrinini), ukuhlaselwa ngokwesondo, kunye nesini esahlukileyo. Ayifani nale studio esingazange sivelise ifilimu ene-R ngaphambili. Ndiqinisekile ukuba ungahamba ngeefilimu eziveliswa zezinye ii studio ezinkulu- iDisney, iWarner Bros, iSony, kunye neUniversal- ungafumana inyani efanayo, ngaphandle kweDisney, phambi kweFox, mhlawumbi ungakhange ujongane neR- Ukalwe ifilimu.
Ndifuna ukonwaba ukuba siyaphula umhlaba; Ngokwenyani ndiyakwenza, kodwa xa imiboniso yabasetyhini bexhatshazwa ngokwesondo kwaye behlaselwa zingaphantsi kwendlela kunamadoda amabini abelana ngesondo ngokuvumelana, ndiyadimazeka. Sifuna zonke iintlobo zamabali e-LGBTQ + axeliweyo, ukusuka kwiintsomi ezonwabileyo zosapho ukuya kwiidrama zabantu abadala ezibonisa isini. Ngelixa kukho intsomi eyenzakalisayo yokuba amabali e-LGBTQ + ngokwesondo, akukho sizathu sokuba ungabonisi i-LGBTQ + yamabali othando yenza zibandakanya isondo.
Kufanelekile ukuba uqaphele ukuba kunyaka ophelileyo ibohemian rhapsody , eyayibonisa ukuba u-Freddie Mercury ulala nabantu abathandanayo, engakhange ikhuphe yonke into e-gay ukuba ikhutshwe e-China, kodwa ikwathintele isifundo ngokubanzi, ukuya kuthi ga apho abagxeki be-LGBTQ + baphakamise imibuzo ebalulekileyo malunga nefilimu
Ndiyavuya Rocketman ibonisa ubuni bukaElton John ngokuphandle, kodwa ngaxa lithile, kufuneka siyiqonde into yokuba inkqubo yokubandakanywa kwifilimu ihamba kancinci kancinci. Izitudiyo kufuneka ziqonde ukuba amabali e-LGBTQ + azo zonke iintlobo athengisa, kwaye ngethemba Rocketman ‘Ibhokisi yeofisi iya kungqina oko. Ukuba akunjalo, mhlawumbi kuya kuba sesinye ishumi leminyaka okanye ngaphambi kokuba siqhubeke nokufumana umxholo we-LGBTQ + kwizitudiyo eziqhelekileyo.
(nge Intatheli yaseHollywood , umfanekiso: Ubungakanani)
Indawo Yokuthenga Into Zababulali
inkosi yamakhonkco isimilo sabasetyhini
Umdlalo othembekileyo wetrailer weetrone
john cho crazy asias ezityebileyo
kovu evela kwingonyama inkosi 2
Ingoma yomxholo wendalo yonke uvakala ngathi
I-bane backstory mnyama knight inyuka